Cishe wonke umuntu ukuya eminyakeni ethile uthola ulwazi lokuhlukanisa nomuntu othandekayo nomuntu oseduze kakhulu. Lokhu okuhlangenwe nakho kunokwakhe, ngoba izizathu zokuhlukanisa zingaba yizigidi, umbhangqwana ngamunye uhlukanisa ngezindlela ezahlukene: omunye umuntu ngokuphansi ngokuthula, othile onamahloni.
Ake sikhulume ngendlela yokusiza umuntu ngemuva kokuhlukanisa nomuntu othandekayo.
Ngemuva kokuhlukanisa, lo muntu usezingeni lokunganakwa okuphelele, uzizwa engajabuli kakhulu, ukuzethemba kwakhe, isifiso sokuphila, uwela kakhulu. Kalula nje, ulahlekelwe ukunambitheka kokuphila. Ngokungangabazeki, udinga usizo lokusekelwa kwengqondo nokusekelwa, okuzomsiza ukuba abuyele esimweni esijabulisayo nesijabulisayo.
Into yokuqala ongayisho kumuntu ophonswe: "Awukwazi ukusiza izinyembezi!". Mhlawumbe othile uzothola lokhu kungenangqondo, kodwa umuntu oshiywe futhi ongejabule kufanele, okokuqala, agxumeze, enze bukhoma futhi enze okuthile. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuba imenze "imise" izinyembezi, futhi uqale umgwaqo phambili - ngqo kwikusasa elisha, eliqhakazile futhi elibaluleke kakhulu.
Ukuphela kothando ubudlelwane - lokhu kunoma yimuphi umbhangqwana ukucindezeleka okukhulu kwengqondo. Ikakhulukazi, lokhu kusebenza kumacala lapho umlingani oyedwa ekhwabanisa futhi ehlasele khona. Odokotela abafanelekayo - izazi zengqondo zithi izinyanga ezimbili zokuqala emva kwekhefu ziyinkimbinkimbi kunomuntu oshiyiwe. Kodwa lesi sikhathi singanciphisa kakhulu uma "kulungile" ukusiza isisulu.
Into yokuqala ongayichazela intombazane elahliwe (noma umfana): ubuhlobo buphelile kuze kube phakade, akukho ukubuyela emuva. Njengomthetho, kunzima kakhulu ukuthi umuntu azwe futhi aqaphele lokhu, kepha uma ekhuluma ngokuzwakalayo ngokuzwakalayo, nokuzwa kwabanye, ngokushesha ubuhlungu obuvela kula mazwi buzophela, futhi lokhu kuyisinyathelo esikhulu kakhulu ekuqondeni "ukutakula".
Umuntu akufanele ashiywe wedwa ngengozi yakhe. Lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu ekusizeni umuntu ngemuva kokuhlukanisa nomuntu othandekayo. Kudingeka abe evulekile, ahlangane nabangane, noma ngisho nangcono, ukuze akhulume ngemizwa yakhe, njengabantu abaningi ngangokunokwenzeka. Le nqubo ibizwa ngokuthi "ukusabalalisa usizi". Yingakho abaningi bezengqondo bekholelwa ukuthi uma umuntu enabangane abaningi kulula kakhulu ukuba asinde noma yiziphi izinkinga.
Uma kungumuntu ovaliwe ongakwazi ukuhlanganyela nabanye usizi lwakhe, masivumele ukuba abe nedayari lapho azobhala khona ngakho konke okuhlangenwe nakho kwakhe. Ngaphezu kwalokho, lapho eveza ukuthi yiziphi izinkinga ephepheni, umuntu angakwazi ukuqonda kangcono isimo esiye sazi.
Emva kwezinsuku ezimbalwa, umuntu udinga ukuphathwa. Kuqukethe okulandelayo: uhlale phambi kwesibuko bese umcela ukuthi azitshele ngezinkinga zakhe. Le nqubo isisiza ekunciphiseni ukucindezeleka. Futhi okubaluleke kakhulu, lapho umuntu eqedela indaba yakhe, makangomomotheka esibukweni sakhe, yena ngokwakhe ngeke aqaphele ukuthi kuyomjabulisa kanjani.
Isinyathelo esilandelayo ukuya emsebenzini. Noma yimuphi udokotela uzoqinisekisa ukuthi lena ingenye yemithi engcono kunoma yikuphi ukuhluleka nezinkinga. Kungumsebenzi ongakwazi "ukudonsa" umuntu uma kuba nzima ngaye. Kuhle futhi okubaluleke kakhulu, sebenzisa njengemithi yokwelashwa kwengqondo, inenzuzo eyodwa eyakhelwe ngaphezu kwazo zonke ezinye: ibuye ikhokhwe.
Uma umuntu enomsebenzi "wokuhlala phansi," isibonelo, ehhovisi, kumele aphoqeleke ukuba asebenze emisebenzini yemisebenzi, ikakhulukazi. Umphefumulo nomzimba wethu kuhlangene, futhi uma umzimba udinwa - umphefumulo uba lula. Angenza noma yini: ezemidlalo, ukuhlanza indlu yonke, ngisho nokulungisa.
Khumbula umbuso owodwa obalulekile: ekusebenzeni "ukwelashwa" umuntu akufanele afihle imizwelo yakhe yeqiniso, makameme, akhale, aphule izitsha. Uma umuntu egcina konke ngaphakathi kuye, khona-ke imizwelo izoqala "ukumphuca", imbhubhise ngaphakathi.
Imvelo! Nakhu omunye ukwelashwa ubuhlungu: uhambo oluya ehlathini, ezintabeni, olwandle noma okungenani epaki, kusiza umuntu ukuba abone ukuthi impilo iyaqhubeka, umhlaba uphenduka, izihlahla zikhula. Ngokuvamile, umuntu osesimweni esingokomqondo okunzima kwengqondo akafuni ukuya noma yikuphi, kodwa kumele aphoqelelwe, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi impilo yakhe igcwele izenzakalo.
Ngokusho kwengqondo eziningi, i-yoga nokuzindla yizixazululo ezinhle kakhulu zokukhala izinyembezi ezingapheli. Ukuzindla kusiza umuntu aphumule umzimba bese ehlisa umphefumulo, kuhlanganise nazo zonke izivivinyo ze-yoga eside zijwayele ukulala.
Uma ngemuva kwekhefu kukhona okungenani ngesonto, kufika isikhathi sokuthola ukwelapha okunye okunye: "ukulahla okudala - ukuvumela okusha". Memezela ukuthi "isiguli" ukuphonsela zonke izinto ukuthi ngandlela-thile zikhumbuze umlingani wangaphambili. Kusobala ukuthi konke okukukhumbuzayo: ifenisha, izindonga kanye nezitaladi, lapho umbhangqwana wangaphambili owahamba khona. Kodwa udinga okungenani ulahle: izinhlamvu, izithombe, nokunye okunjalo. Kulokho, kubalulekile ukulahla ngaphandle kokuphinda uphinde uphinde uphinde uhlole izithombe zakudala.
Ngemuva kwenyanga, umuntu uqala ukuzwa ukuthi ukuhlupheka okuphelile sekuphelile, ubuhlungu buyaphuma, kulula ukuphefumula. Kodwa lezi zindlebe, njengombuso, ziyakhohlisa. Iqiniso liwukuthi ngemva kwemizwelo enobudlova, kuvela "ukuthula", ubuhlungu obukhulu, okuyinto ngezinye izikhathi obangela ubuhlungu obukhulu nakakhulu. Ngakho-ke, uma isisulu sinethuba elinjalo lemali, kungcono ukuhamba uhambo, okungenani encane, kodwa okungenani ngesonto. Kusuka ohambweni, usevele ebuyisela umuntu ohluke ngokuphelele. Izazi zengqondo zikholelwa ukuthi ikhambi elihle kakhulu lobuhlungu obusha "bokuthula" yimimoya emisha, abajwayele ukuxhumana nabo.
Manje into esemqoka ukungamvumeli ukuthi umuntu ashiye indlela ehlosiwe, usevele evuselwa ekuphileni, kodwa usadinga isikhathi. Ngesikhathi esidinga ukukhuluma okuningi, makatshele ukuthi impilo yakhe yayingakafiki ngaphambi kokuhlangana nomlingani okade naye, ukuthi kwakutheni, yiziphi izincwadi azifunda ngaleso sikhathi, yiziphi ifilimu ayithandayo, lapho ayezijabulisa khona nabangani, lapho aye khona ngempelasonto. Okubaluleke kakhulu, ukugqugquzela "isiguli" ukuba ashiye noma yiziphi izinhlelo zokuziphindiselela, kubalulekile ukufakazela kuye ukuthi "ukulungiselela ukuziphindiselela, balungiselela ithuna lambili" futhi ngeke lilethe noma yimuphi umuntu ukukhululeka, kodwa kuzokwehlisa kancane kancane "inqubo yokuthola".
Indlela yokufunda ukugcina izimfihlo?
Indlela yokuthola ukuzithemba nokuqeda izinkimbinkimbi
Indlela yokunqoba nokulahla amahloni
UMose wenjabulo, i-sophrology ewusizo yansuku zonke
Ifoni yeselula yanamuhla yesifazane - indlela ongayikhetha ngayo?
Izimbangela ezintathu zokulala. Yeka ukuthi ungalutholi kanjani lesi sifo?
Xe kusuka inyama e-Korean
Indawo yomlilo endaweni yangaphakathi yanamuhla
Okushiwo umbala wezinwele empilweni
Autumn Carnival: iqoqo Christian Louboutin Autumn / Winter 2016
Indlela yokuthola umfana ngobuhlobo obungathí sina
Ama-postcard amahle ngo-Meyi 9 ngezandla zabo siqu: ezintathu-ntathu, kumasu wokuqeda kanye nokwaziswa kwe-scrapbooking
Amaqebelengwane angama-coconut namantongomane
Izidingo zobulili zamadoda aneminyaka ehlukene
Ukunakekela intamo, indlela yokuvimbela ukubukeka kwemibimbi